SD Card Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka SD Card
Recovery SD Card: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga SD Card ee Windows iyo Mac OS
Ever si qalad ah laga badiyay sawiro qaali ah, videos, iyo macluumaad kale oo ka card SD aad? Weli argagixin iyo waa hab inuu ka soo kabsado kuwa files formatted, tirtiray oo laga badiyay? Waxaad ku odhan doonaa, ma jiro jawaabta dhabta ah waa Haa. Waxaad samayn kartaa dib u soo kabashada card SD ah oo si fudud on your computer iyadoo aan loo eegayn waxa aad ordaya gaar ah la Windows ama Mac OS.
SD Software Recovery Card, ka SD Card Ladnaansho Files in 3 Talaabooyinka
By ku tiirsan dhinac saddexaad xogta soo kabashada card SD software - waa weeraryahan soo jiidasho leh si toos ah. Micro xogta SD software kabashada isticmaali doonaa algorithms horumar iskaan card SD iyo qod disk si ay u baadhaan faylasha aad tirtirayaa. Wondershare Photo Recovery (la heli karo Windows 8) iyo Wondershare Photo Recovery for Mac (la heli karo Mavericks) waa software sida dib u soo kabashada oo soo kaban karto, sawirrada card SD si fudud, iyo sidoo kale video iyo files audio.
Tani software SD kabashada card waa quruxsan fududahay in la isticmaalo. The interface saaxiibtinimo-user ka dhigaysa wax walba si cad oo sahlan in ay ku shaqeeyaan. Just download version maxkamad free hoose si aad u leeyihiin a day hore.
Kabsado image, video iyo files audio xaaladaha khasaaro xogta ugu badan
Read kaliya, si sahlan loo isticmaalo, iyo kharash-ool ah
Kabsado xogta ka scan horay u badbaadiyey aan rescanning
Files image Kulanka Xiisaha Leh hor kabashada iyo sii kaliya kuwa aad rabto.
Qabtaan Recovery Card File SD ee Mac ama PC
No arrinta oo version aad doorato, talaabooyinka soo kabashada waa isku mid. Just download version saxda ah ee computer iyo u isticmaal sida tallaabooyinka hoos ku soo bandhigay.
Tallaabada 1 Connect card SD aad si ay u bilaabaan
Halkan waxaan isku dayi version Windows inuu ka soo kabsado SD card files. First of dhan, xirmaan card SD si aad u computer ka, ka dibna loo soo dajiyo barnaamij card SD ah. Waxay u ordaan oo riix "Start" button uu furmo suuqa ku bilaabatay si ay u bilaabaan soo kabashada card SD.
Tallaabada 2 Dooro kaarka SD si ay u iskaan
Marka kaarka SD aad la aqoonsan yahay barnaamijka, waxaad ka arki kartaa waxa ay soo bandhigeen in liiska drives. Dooro warqadda drive kaarka SD aad iyo guji "Scan" si ay u baadhaan files lumay ama la tirtiray waxa on.
Fiiro gaar ah: Waxaad kala miiri karaa natiijada oo isticmaalaya "Xulashada Filter" function haddii aad ogtahay waxa noocyada kala duwan ee file aad raadineyso. Just guji ku yaal oo (audio, sawir ama video) dhigay.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta card SD eegista
Marka scan ka baxayo, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u eegis helay files si ay u hubiso in aad files lumay waxaa la helay ama aan. Markaas files dooro aadna doonayso inaad ku soo kabsado card SD ka mid ah.
Xaaladood khasaaro xogta card SD Common
Wondershare Photo Recovery Qaban karto soo kabashada xogta card SD hoos xaaladood hoos ku qoran:
»files dhaco tirtiray ka card SD
»formatted card SD
card »SD helay kharribeen ama geli
Dhanka kale, kaarka SD caanka ah, sida kaadh Lexar SD, kaarka SD Sandisk, kaarka SD ATP, kaarka SD Kingston, kaarka SD Transend, kaarka SD PNY iwm, iyo noocyada card sida kaarka SD Mini, kaarka SDHC, iyo kaarka MMC ayaa dhamaantood la taageeray.
Haddii aad sidoo kale doonayaa inuu ka soo kabsado files kale, sida Emails, waraaqaha Xafiiska, Archieves, PDF files, iwm ka your computer ama warbaahinta kale lagu kaydiyo, waxa kale oo aad isku dayi kartaa in la: Wondershare Data Recovery ama Wondershare Data Recovery for Mac , kaasoo kara inuu ka soo kabsado ku dhowaad dhammaan noocyada file.
Talooyin More muhiim u ah kaararka SD:
Marka aad si qalad ah xogta lumay kaarka SD aad, isla markiiba joojiso isticmaalka kaarka SD aad ku kaydsan sawirada qaali ah, filimada iyo faylasha kale. Haddii aad wax badan ka taxadir yihiin, furaysto card SD ka soo qalabka sida camera digital, fiidiyo, telefoonka gacanta ama xataa Console ciyaarta, iwm, oo wuxuu dhigay meel ammaan ah.
Digniin: Marna ha kaarka SD caato ah ay fursad kasta si ay dhaawac jirka.
Waa maxay sababta aad hore waa in wax kuwii? - Si loo kordhiyo fursadda xogta soo kabashada card SD. Farsamo ahaan, tirtirto ama qaab hal doorasho aan marna masixi doono xogta dhabta ah in badbaadiyey kaarka SD aad. Xogta dhabta ah ayaa weli ku kaydsan qaybaha qaaliga ah disk ku qoran kaadhka SD aad. Ilaa iyo inta xogta kuwa aan overwritten (Haddii aad sii badbaadin files dheeraad ah, ay la overwritten laga yaabo), waxaa hubaal ah waxaa suurtagal ah in aynu kuwa files lumay soo nool la software kabashada card SD.
> Resource > Ladnaansho > Siduu u Recovery Card SD